Israa'el baqattoota kuma 35 ol ari'uufi - BBC News Afaan Oromoo
Israa'el baqattoota kuma 35 ol ari'uufi
Image copyright JACK GUEZ
Goodayyaa suuraa Bara 2014 baqattoonni Israa'eel gaaffii koolu galtummaa isaanii akka fudhattu mormii wayita godhan
Dhiheenya kana qondaaltonni Israa'el baqattoota 35,000 lammiilee Eertiraa fi Sudaan jireenya isaanii Israa'el godhatan, gara biyyoota sadaffaatti dabarsuufi.
Tarkaanfii kana kan didan yoo ta'es hidhaan akka isaan eeggatu beeksisaniiru.
Baqattoonni biyyoota birootti dabarfaman lammiilee Eertiraa 27,500 fi lammiilee Sudaan 7,800 akka ta'an odeeffannoon Komishiniin Olaanaa Godaantotaa Mootummoota Gamtoomanii (UNHCR) irraa argame ni hima.
Karoorri kun baqattoota gaaffii kolugaltummaa dhiheessanis kan ilaallatu ta'uu UNCHR, waajjira Telaviivitti hoggantuu Komunikeeshinii kan ta'an Shaaron Harel BBCtti himaniiru.
Dhimmi baqattoota gara biyya sadaffaatti dabarsuu komishinichaaf yaaddessaa tahuu dubbatu.
Baqattoonni kunneen karaa seeraan alaa, daangaa Masrii ce'anii kan galaniidha. ''Dubartoonni fi daa'imman hedduun jiraachuun isaanii dhimmicha rakkisaa taasisa,'' jechuun himu Shaaron.
Manni Murtii Olaanaa Israa'el imaammata baqattoota gara biyya sadaffaatti dabarsuu kana, bara 2015 kuffise akka ture, marsariitii komishinichaa irratti barreeffameera.
Baqattoonni biyyoota dhaqan hundatti akka nageenyi isaanii eegamu, akkasumas heeyyama hojii akka argatan gochuuf waadaa seenanis, hojiirra akka hin oolle dubbatu.
Sagantaan kun bara 2013 kan hojiirra oole yoo ta'u, hanga aammaatti, baqattoonni Eertiraa fi Sudaan 4,000 ta'an gara Ruwaandaa fi Yugaandaa ergamaniiru.
''Akka angaawoonni Israa'eel jedhan sana fedhii irratti kan hundaa'e miti. Iccitii kan raawwatamuu fi iftoomina kan hin qabne ture,'' kan jedhan Shaaroon, baqattoonni dirqisifamanii deeman akka jiran namootaa ragaa bahan irraa akka hubatan dubbataniiru.
Ruwaandaa irraa karaa seeraan alaa gara Yugaandaatti warri geeffaman, biyyoota hedduu keessa kutuun gara Kuubaa yoo galan, Yugaandaa irraas gara Naayiroobitti karaa seeraan alaa deemaa utuu jiranii kan argaman hidhaaf saaxilamaa akka jiran Shaaroon dubbataniiru.
Goodayyaa suuraa Bara 2014 gaaffii koolu galtummaa isaanii akka fudhatamu ala buluun mormii wayita godhan
Haalota kanas koomishinarichi olaantummaan to'achuu akka hin danda'iin dubbatu.
Hanga ammaatti baqattoonni kumaatama hedduutti lakkawaman Israa'eeliin haa galaniyyuu malee, baqattoota Eertiraa saddeetii fi baqattoota Sudaan lama qofaaf angaawoonni biyyattii beekamtii kan kennan.
Baqattoonni hayyama jireenyaa qabanillee, biyyatti keessatti hojjechuu akka hin dandeenyeef mirgi isaanii tokko tokkos kan jalaa daangeeffame ta'uu isaa dubbatu Sharoon.
Akka mana hidhaatti kan ilaalamu manni turtii baqattoota Hooloot akka cufamu kaabineen biyyatti torban kana keessa murteesseera.
Murteen humnaan baqattoota gara biyyoota sadaffaatti naanneessuu dandeessisuus, torban kana keessa paarlaamaa Israa'eeliin ni kennama jedhamee eegama.
Waggoota darban keessa baqattoota 2,400 ta'an Israa'eel irraa fuudhuun biyya biraa keessa akka isaan turan godhamaniiru.
Rakkina godaansaa: Gamtaan Awurooppaa karoora godaansaa baase
Godaantota: Tiraamp walii galtee haaraaf haal-dureewwan kaa'an
9 Onkololeessa 2017
Haasawa Kaayirootti taasisaniin Hamaasiifi Faataah 'waliigalteerra gahan'
12 Onkololeessa 2017
Manni Maree muudama kaabinee haaraa Dr. Abiy dhiyeessan raggaasise
Dhaloonni haaraan mo'atee waan ba'e fakkaata-Obbo Gabruu G/Maariyaam
Zimbaabween narsoota 15000 ta'an hojiirraa ariite
Kaampiin baqattootaa Dadaab lolaadhaan miidhame
Dheebuun dimokraasii sadarkaa duubatti hin deebinerra ga'eera
'Lubbuu Mooyyaleetti darbaa jiruuf ammallee xiyyeeffannaan hin kennamne'
Daayimandi Pilaatinamzi rakkoo keessa gale
Tiraampi maree Kooriyaa Kaabaa dhiisanii ba'uu malu
Haasawa Dr. Abiy irratti xiinxalaan maal jedhu
Copyright © 2018 BBC. Qabiyyee iddoola alaatiif BBC'n itti hin gaafatamu Haala itti fayyadama geessituuwwan alaa keenya/imaammata geessituuwwanii